Czech Jannada - PetrPikora.com
Czech Jannada (Jarmal Böhmisches Paradies) waa magaca ee deegaanka ee Pojizeří dhexe taas oo uu leeyahay fiirsashada sare ah taxadiri dabiiciga ah iyo taariikhiga ah. aagga Czech Jannada asal ahaan lagu tilmaamay Litomerice (imikana loo yaqaan Garden of Bohemia) ku nool yihiin dadka ku hadla-German. Qeexitaanka hadda waxaa lagu sameeyay 2. kala bar 19. qarnigii. Sida qorayaasha waxaa badi lagu sheegaa sida martida HBS booqday HBS Sedmihorky ah, isticmaalka ugu horeysay diiwaan, si kastaba ha ahaatee, waxay ka timaadaa Tifaftiraha Václav Durych of 1886.
Territory been ah oo ku saabsan 90 km waqooyi bari ee Prague waxaa qiyaastii kumyadu by magaalooyinka: Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Frýdštejn, Zelezny Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Tareennada iyo Jicin. "Wadnaha Jannada Bohemian" waxaa si caadi ah loo tixgeliyaa Turnov. Gobollada ugu weyn ee gobolka waa Buurta Kozákov iyo burburinta Castle Trosky. Weyn ayaa sidoo kale magaalada dhagaxayga weyn, dhagaxyada gaar ahaan Prachovské, dhagaxyada Příhrazské, Hruboskalsko iyo balliyada, waayo Žabakor, gudubno Komárovský iyo balliyada in podkosteckých podtroseckých iyo dooxooyinka tusaale ahaan..
Czech Jannada sidoo kale waa magaca deegaanka ah muuqaalkii ilaaliyo, hadda jira tan iyo 1955, taas oo ka kooban meelo kaliya seddex yar gudahood aag weyn ee gobolka khayaali dalxiis Czech Jannada.
Maloskalsko Nature Park waa meel ilaaliyo dhawaaqay in 1997, oo ku taala degmada xadka galbeed ee gobolka Jablonec nad Nisou Liberec, qayb ahaan in Czech uurqaadida Jannada. Waxay ku taal labada bangi ee webiga Jizera, iyada oo ay joogaan dabeeco hodan ah oo ka buuxa magaalooyinka dhagaxleyda ah. Xarunta xuska, sida uu dhigayo beerta loo magacaabo, waa tuulada Malá Skala.
Damacsanyihiin inay sheegi this park dabiiciga ah ka dadaalka falayaal dheer in ay ballaariso aagga la ilaaliyo ee Czech Jannada ee degmooyinka Little Rock, Koberovy, Frýdštejn, Líšný iyo qayb Pěnčín iyo Zelezny Brod keentay.
Miisaanka aaggan waxaa sameeya Wabiga Jizera. Laga soo bilaabo Železný Brod illaa Turnov, waxay ku wareegaysaa daadad aad u qulqulaya wabiga qulqulaya oo ka gudubta wejiga labaad ee Pojizeří - Ještěd-Kozákov Ridge. Goobaha ugu qiimaha badan, qaybo ka mid ah kuwaas oo horeba uga mid noqdeen shabakadaha aagagga la ilaaliyo ama sifooyinka muuqaalka muuqaalka, waxay ku xiran yihiin waxyaabahan. Noocan ah NPP, Bučiny u Rakous, PR Ondříkovický pseudo-karst nidaamka. Kobcinta kala-baxsan ee tuulooyinka iyo degsiimooyinka ayaa dhammaystiraya dabeecadda caadiga ah ee aaggan.
qayb Top ee dhulka, oo waxaa ku badan shanlo Vranovský iyo dhagaxyada qalalan, aasaaseen dhagaxyada sandstone. Part of the levees park dabiiciga ah Jizery firirsan daboolay Dhirta iyo meelaha ballaaran in ay sidoo kale waxaa ka mid ah wold webiga iyo qayb ka mid ah dalcadaha yaacday ilaa la dhul iyo qararka badan. Jizera waxay u adeegtaa sida dariiqa ka soo jeeda buuraha iyo buuraha hoostooda ee hooseeya. In jihada ka soo horjeedda ay weheliyaan webiga flora thermophilic fidaa buuraha galay.
Cunsurka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee agagaarkan waxaa ka muuqda dhirta ubaxyada, ubaxyada iyo geedo geedo leh. Nidaamyada dabiiciga ah ee aan xeryaha ku jirin waxaa ka mid ah cawska qoyan, qoryaha hore ee sandstone, dooxada Vazovecký potok iyo goobta xayawaanka cadi-cad ee Záborčí.
Marka la eego substrate aad u kala duwan dhulka waxaa Maloskalsko.¨ iyo qayb ku xiga Železný kala duwan kaydkiisu bulshooyinka iyo noocyada ay yihiin laga saaro xubno ka relict iyo haraadiga Dhirta asalka hayo goobaha Dhawa heli karo (kaymaha Beech, geed-ka lalmaday, iyo mudacyadii dhagax weyn, seeraha baajiyey, ilo, iwm). . Waxaa ka mid ah noocyada dhirta muhiim halkan sii kordhaya tus huruud tuberose, shacaab hore trigeminal, lonchitis polystichum, dacas, casaan Helleborine, orchid helleborine cad iyo orchid. Magaalooyinka Sandstone Rock waxay bixiyaan jawi ku habboon noocyada muhiimka ah ee shimbiraha. Waxay halkan ku nool Swallowtail, madaxeedana socod baradka, salamander, rah, qorratada, slowworm oo dheeraad ah.
Klokočské Rocks waa dabiiciga dabiiciga ah. Maya. 918 ee Jičín Hills, galbeedka Klokočí ee Degmada Semily ee gobolka Liberec. Aagga waxaa maamula xafiiska gobolka ee ANCLP CR - Liberecko. Goobta dabiiciga ah waxay ku taallaa dhulka xeebta Bohemian Paradise Protected Area, oo ah goob muhiim ah oo muhiim ah oo Yurub ah, Burburka Jizera oo u dhaw Austria iyo Bohemian Paradise Geopark.
dhagaxyada Klokočské sameynta magaalada dhagax at cidhifka kuesty afar gees sandstones quartz of Turonian Sare si Coniacian, darsatid galbeed. Dhibcood ee ugu sareeya (m 458) been on kicisay qaab bari denudačním. Kuesty kaca yar oo dhisme ah bartamaha iyo waqooyi galbeed kala qayb sufozní sinkholes badan, istaajineyso sare kacay munaarado, tiirar iyo derbiyo dhagax weyn oo leh qaababka sida cutub úpatními odsedání gravitational awood badan. Degaanka asalkiisu ka soo jeedo niches dhagax weyn, godadka dacayadeed (kuwa badan oo iyaga ka mid ah ayaa sidoo kale muhiim ah archaeologically) iyo dhagaxyada likaha. Dhagaxyada ayaa badanaa ku qurxan geedo geed leh, mararka qaarkoodna geedo bjørk. Qeybaha koonfureed waxaa ku yaal burburkii dhismaha ee Rotštejn Rock. Waxaa jira xarumo fuulaya. terraces dhagaxa weyn ka soo line janjeedha NW-SE views fog ee guud ahaan buuraha waqooyiga qodo Rovno.
Kozákov (744 m) waa buur ugu sareeya oo ah Kozákovský Ridge iyo Jannada Bohemian. Hill ayaa waxay dooneen tan iyo wakhtiyadii innoo sidii kayd dhagaxyo qaali ah, kuwaas oo ugaarsadaha innoo soo saaro qalab fudud. In ka godadka dhagaxyada ugu cad agate spherical filler, yasbid, ametustos, crystal, quartz qaaca iyo dhagaxyo kale oo qaali ah. Goobta waxaa loo isticmaali jiray qarniyadii dhexe si loo qurxiyo dhismayaasha. Kozákov sidoo kale waa meel caan ah oo loogu talagalay barxadda.
Qaybta ugu weyn ee territory Kozákova waxa ay ka kooban dhagaxyada Palaeozoic, kuwaas on top of xilkani woqooyi iyo bari daboolay by basalt Tertiary iyo kayd Kobenhagen ah. 6 ilaa 4 malaayiin sano, Kozakov wuxuu ahaa volcano firfircoon. Oo tan dhanka galbeedna Kozákova ka kooban yahay inta badan ee sandstones Mesozoic Cretaceous Cenomanian. Kuwani waxay jebiyeen dhawr jeer oo ka mid ah Tixiiciga waxayna keeneen qaabkoodii hore.
Waa quruxsan ballaadhan sinnayn ee uplift badnaan antiklinálního bazaltandezitového (melafyrového) ee dalcadaha sare iyo hoose dhexdhexaad ah bariga (15-20 °) iyo qaybo peak flat on dhagax dab ka duuli Neogene basalt olivine (basalt), ka dib markii hoos u ordaya dhabarka bari koonfureed. At jiirada galbeedka sare iyo steeper lagu muujiyey blocks tectonic ah sandstone (ugu badnaan. 667 m) la xuduudda derbiyada, munaaradaha dhagax weyn, niches, godadka, úpatními dagax weyn u saar. Dhaqdhaqaaqyada iyo dhirbaaxada basaltada ah waa wabiyo dhagaxyo iyo badda dhagax.
Goobta koonfur-galbeed waxaa ku yaal boodh aad u ballaaran oo loo yaqaanno Votrubec Quarry. Waa mid gaar loo leeyahay Votrubka, waxaana sidoo kale ku jira Dhowr Masrax oo Muhiim ah. Lacag yar, waxaa suurtagal ah in lagu qodo boodhka iyada oo la adeegsanayo qalab amaah lagu iibsado xitaa maanta si aad u hesho dhagaxyo qaali ah, taas oo milkiiluhu ka dibna khasaari karo.
Dhamaan qarniyadii dhexe, waxay ku dhufteen dabka signalka Kozák. Kadibna kumanaan kun oo dad ah ayaa lagu soo ururiyey halkaan. At 1901, riwaayadda Turnov Jan Prousek ayaa soo jeediyay sare ee dhismaha midkood Neo-Romanesque chapel ee St. Cyril iyo Methodius ama in ka badan mitir 20 tuulada sare ee Slavic leh godka macmalka lagu beeray dhagaxyo dhirif ah. Kadib dhalashada Czechoslovakia, 28 sanadkiiba la gubay. Bishii Oktoobar. Ka dib geeridii Franz Ladislav Rieg ee 1903, fikradda wuxuu ku dhashay si uu u xusuusto xasuustiisa isaga oo dhisay Mareegtii Rieger. Sannad ka dib, Kooxda "Rieger Mound Construction Teams" waxay soo bandhigtay ururin guuleysi leh oo wadanka oo dhan lagu guuleystay. Later, laba fikradood oo la tartamayay: tuulo ama mawrusi ah oo ka soo horjeeda makhaayad iyo dhismo Riivov. Kala duwanaansho labaad ayaa la qaaday Club Tourist Club. Dhererka albaabka waxaa la dhigay 29. August 1926. Guryaha waxaa laga dhisay uruurinta, hadiyado iyo deeqo laga helo magaalooyinka u dhow. 24 si rasmi ah ayaa loo furay. Juun 1928. Intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka, cariishadu waxay ku qabsadeen Jarmal iyo ka dibna ciidanka Czechoslovak. Kadib Febraayo 1948, dhismaha ayaa loo qoondeeyey oo loo wareejiyay makhaayadda iyo cuntada. Bishii May ayaa 1964 ku gubtay. Kulanka 1994 ee dalxiisayaasha Czech ee kuyaal yar oo ku yaala gobolka 10-kii sannadood waxay ka soo iibsadeen gobolka. At 1995, minaar mitir oo 40 ah oo leh muraayad lagu eegayo mitirka 24 ayaa la furay. Minaaraddu waxay sidoo kale u adeegtaa sida birta isgaadhsiinta birta ee ciidanka, bilayska, iyo dab-demiyeyaasha. Tan iyo 2002, Kozákov wuxuu ka mid yahay aagga Bohemian Paradise Protected Area. 2003, dukaanka Rieger ayaa dib loo furay kadib dib u dhiska guud. Muuqaalka lookalka ah wuxuu bixiyaa aragtiyo ah Bohemian Paradise, Pojizeří, České středohoří, Giant Mountains iyo Buur Xoraynta, Ještěd, Mountains, Podkrkonoší, Broumovská vrchovina, Orlické hor iyo suurto galka suurtagalnimada sidoo kale hareeraha Bohemian-Moravian Highlands.
Dabeecadda dabiiciga ah ee Příhrazské skály ayaa lagu dhawaaqay sannadka 1999 wuxuuna ku yaal koonfurta iyo galbeedka tuulada Příhrazy ee degmada Mladá Boleslav. Sababta loogu talagalay ilaalinta ayaa ah mid muhiim u ah dhagaxyada, bulshooyinka dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo kuwa dabiiciga ah, goobaha geomorphologically qiimo leh.
Goobtani waa kakan tuulooyin dhagax ah oo ku yaal xadka qulqulka dhagaxa sandstone. Muuqaalka ugu muhiimsan waa qaabka dhagaxa lagu magacaabo Kobylí ee madaxa. Gudaha magaalada waxaa ku yaal Hynstas. Mid ka mid ah 17. qarnigii ugu dambeeyay waxa uu ahaa hoy u ah walaalayaal Czech ah. Meelahaas waxaa ku yaal haraadiga 13. qarnigii.
Příhrazská vrchovina ayaa hoos dhacaya Vysskejská vrchovina Highlands ee Jičín Hills. Qeybta ugu sarraysa ee aagga 463,5 m waa Mujský Hill. Xaddigan aan dhammays tirnayn ee xididka olivine neefeline waa qoorta tectonic qiyaastii kala bar heerka qiyaasta koonfur-bari. Tani waxaa la heley iyadoo la barbardhigay dhererka dusha sare ee dhagaxa ah ee dhagaxa ah iyo heerarka biyaha ee laga soo bilaabo aasaaskooda. Qaababka ugu da'da weyn ee Jasiiradda Příhraz waa heerarka qaabdhismeedka - hadhaaga dhismaha dhismaha. Magaalada dhagaxa ah ee Příhrazské Rocks waxaa ku jira Tower 178. Intooda badani waxay istaagaan cidhifyada dooxooyinka xeebta ee madaxa ah ee madaxa wareega. Hore wuxuu ku xiran yahay cirifka dhululubyada iyadoo la raacayo meelaha dildilaaca wareegsan. Goobtii ugu weyneyd abid soo martay horaanteedii ayaa ka dhacday Juun 1926. Natiijo ahaan, qeyb weyn oo ka mid ah tuulada Dneboh ayaa la burburiyay, waddada degmada Olovada ayaa waxyeellaysay.
Natiijada ka dhalatey dhulalka madow, meelaha dillaacsan ee duufaantu way sii ballaaranayaan, taas oo u oggolaanaysa samaynta ficil-nacayb. Waxaan ka helnaa dhagaxyada Příhrazske qiyaastii lixdan. Midka ugu caansan waa cirifka pseudocross leh hungurigu ku fidayo qoto dheer oo mitirka 22,5. kaas oo laga helay 1960, oo labo sano ka dib uu ku jiray, qofkii Juusera Ginzel, oo ah milkiilaha Jizera Manure House, ayaa soo degay. Dooxooyinka jiifka ah ee Krtola iyo Vlčí Důl, waxaan ku soo bandhigi karnaa albaabbo dhagax ah, godad dhagax iyo godad. Krtola Cave, oo sidoo kale loo yaqaano Sklep na Chodové, waa godka ugu weyn ee Jannada Bohemian. Mitirka mitirka dheeraadka ah ee 40 ayaa markii ugu horeysay lagu soo bandhigay 80. sano 19. qarniyadii hore ee dhaqanka Josef Ladislav Píč.
Waxaa jira marar dhaadheer iyo birta lagu dahaadho. Waxaan halkan kula kulmi karnaa dhagaxyada. Waxaa la aasaasay ciid cokan brown (Cambisol eutrophic) la Rankers (caadiga ah iyo litickým) iyo sandstones arenosoly acid (s Cambisol arenická podsol arenickým). pseudogleys Waterlogging mashquulin jagooyinka (qiimaynta iyo caadiga ah) la xabagta (caadi ahaan organozemním a) qeyb ka mid ah reserve sidoo kale organozem qiimaynta.
Meelaha qashin-qubka waxaa ku badan haraaga oo leh qaybo badan oo ka mid ah bulshooyinka kaynta ee dabiiciga ah. kaynta Pine on dushooda dhagaxyada, faaqidaad qoryo geedkii thermophilic on loess qalcadahaba qadiimiga ah, iyo kaynta qashin hoos ugu xumaa ee Lab, halkaas oo uu korayo dilka ah (rediviva Lunaria), dhigeysa ugu qiimaha badan oo iyaga ka mid. Meelo xiiso leh jasiiradda dhirta kore ee la yidhaa godka Ivan (Stipa joannis) ee dhagaxa dhagaxa dhagaxa ah ee Hrad. Waa meesha ugu dambaysa ee loo yaqaano thermophysics ee qaybtan qaybta Bohemian Paradise. Intaa waxaa dheer, noocyada kale ee dabiiciga ah oo xiiso leh ayaa lagu arkay. Xerada Drábských světničkách, geedkii oo dhan (Kotoneaster integerrimus) ayaa koraya. -bedelka waxaa laga heli karaa haadaamaha Beech shaydi gran leh oo ay derbiyo dhagax weyn dabiiciga ah iyo qoryo beroosh ah taagan Vranča (Huperzia selago) iyo Lycopodium Annotinum (Lycopodium annotinum). Marka laga eego aragtida botanical, Krtola waa tan ugu caansan.
Booska koofurta Boondheer Obekezec, waxaa jira geed lagu xasuusto oo lagu magacaabo Black at Obevents.
Hruboskalsko waa dabeecadda dabiiciga ah caan ku ah 22. Abriil 1998. Iyada oo ha 219,2 guri waa mid ka mid ah magaalooyinka dhagax weyn ugu weyn ee aagga muuqaalka ilaaliyo ee Czech janno. Sababta loogu talagalay ilaalinta waa magaalo weyn oo dhagxaan leh oo la xajistay. Magaalada dhagaxa weyn Hruboskalské ka mid ah boqolaal massifs ayaa dhagaxayga weyn iyo munaaradaha oo kala duwan, kuwaas oo ay gaaraan meelaha dhaadheer ee ilaa 60 m. Sababo la sandstone ee iska caabin hoose iyo saamaynta socda of tiro ka mid ah dhagaxyada ay hodan ku yihiin noocyo kala duwan oo qaabab iyo foomamka (abaaraha, daaqadaha, irdaha). Hruboskalsko waa qayb ka mid ah Czech Geopark Jannada, kaas oo uu ka mid ahaa in Network Geoparks Yurub ee October 2005.
Waa mid ka mid ah goobaha ugu badan ee caanka ah ee Czech, munaaradaha ugu caansan waa Kapelník, Skull, Maják iyo Osudová. Inta u dhaxaysa jimicsiga fuulitaanka Czech iyo Goobta Bohemian Protected Area, heshiiska ayaa la soo gabagabeynayaa, oo ay ku jiraan xaaladaha kor u kaca sandstone.
Magaalada hruboskalské waa magaalo muhiim u ah dalxiiska. Waxaa ka mid ah taxadiri ugu caansan waxaa ka mid ah qalcaddii xanafta Rock, taas oo la dhisay on Massif dhagax horay 14. qarnigii iyo Castle Wallenstein. At wadnaha daafaca la dhisay meelo badan meelaha sida Marian rajo, rajada of guutadii, at libaax rajada iyo kale oo martida dhawrtaan kartaa qaababka dhagaxa weyn cajiib ah oo aad u badan munaaradaha wareegsan climbers zdolávající. Thanks Hruboskalsko ilo hodan ku ah calcium udhigo loo sameeyay HBS Sedmihorky.
Hruboskalsko Reserve Nature Reserve waxay ku taala gobolka Liberec ee 3 oo ka timid magaalada Turnov. Waxay u dhexeysaa tuulooyinka Sedmihorky, Hrubá Skála iyo Kacanovy. Xajmigu wuxuu u dhexeeyaa 265-420 m. Hruboskalskee dhagaxa magaalada waa magaalo weyn oo qiimo weyn leh oo ku yaala Bohemian Paradise Protected Area.
Sameynta magaalooyinka dhagaxyada ayaa loo qaybiyaa afar weji. Midka koowaad waa marxaladda diyaarinta ee jirka ee sandstonestone uu ka hooseeyo heerka dhulka. Sidaas darteed ee dhulka keentay in formation of diirkja sandstone xoog, kaas oo ku wareegsan sandstone ka jilicsanaayeen. Marxaladan, a qiyaano saamayn baraf da 'kaas oo ka dhacay inta lagu guda jiro qaboojinta dildilaaca biyo-dhalista. Wajiga xiga waa wajiga koowaad ee lagu gartey sooyaalka iyo taakulaynta. Natiijadu waa dhul beereed oo ku yaalla Bohemia dhexe oo leh muraayado sandstone ah. Wejiga saddexaad waa wajiga baaluq oo dhacda ka dib dhamaadka uplift tectonic. Marka marxaladdan, noocyada kala duwan ee cimilada siin qalalin ilaaliya waa jajabi exfoliating jabay, oo ay raacaan dhinacyada derbiyada dhagaxa oo waxay yeelan karaan oo dhumucdiisuna waxay of ilaa 1 m. Wajiga ugu dambeeya waa wajiga ah ee gabow, ku lug leh burburinta qaababka dhagaxa. Burburinta waxaa inta badan keena dhaqdhaqaaqyo, dhagax adag iyo magaalo dhagaxyo. Sidaa daraadeed, waxaan arki karnaa magaalada dhagaxa muraayadaha oo ah meelo kala duwan. magaalada dhagaxii, iyo sidoo kale dadka kale ee gobolka, horumariyo 18-20 milyan oo sano.
Hruboskalská vrchovina waxaa iska leh Vyskeřská vrchovina, kaas oo iska leh hoyga Turnovská. Dhammaan tani waa qayb ka mid ah tabočeská tabula. Hruboskalská vrchovina waa jilif midab leh, kaas oo xuduud u leh fasaxa Liibiya iyo nasasho ka timaada Webiga Jordan River iyo webiga Žehrovka. Gundhigga magaalada ee dhagaxa ah ayaa ka kacday qoyaan yar yar, halka microforms of of malab, dhagax weyn, dhagaxyada iyo daaqadaha la abuuray inta lagu jiro holocene. Calaamadaha ugu caansan waa Lighthouse, kooxda Kapelník iyo Dragon Rocks. Waxa kale oo aan arki karnaa tiro godaad ah, albaabbo dhagax iyo tunnel. Magaalada magaalada Hruboskalské waxay ka kooban tahay sandstone ku taallacsan yahay. Awoodda sandstone waa 120 iyo qaar ka mid ah bakhaarada dhagaxyada sare waxay sare u yihiin 60 m.
Qiyaastii magaalada oo dhan waa la daboolay kaymaha (97%). Saldhigyada caadiga ah waa cufnaanta bjørk, kaas oo lagu ilaaliyey oo kaliya kala firdhay, gaar ahaan meelaha ugu sarreeya ee buuraha dhagaxyada ama dhagaxyada waaweyn. Waxa kale oo aad ka heli kartaa qoryaha geedo geed leh, laakiin leh dhir yar. Kobaca kale ee dhagaxa ah ee magaalada waa dhagax asiidh ah, kaas oo daboolaya duufyada qoyan ee ka dhexeeya dhagaxyada.
noocyada sifo daaha geedo yaryar undergrowth gaar ahaan waa guduudan yahay bilberry (myrtillus Vaccinium), Heather (Calluna akne), whortleberry cas (Rhodococcum vitis-idaea), Deschampsia flexuosa (Avenella flexuosa), bracken (Aquilegia akne) iyo timo bika (Luzola pilosa) . In webiyada qoyan inta badan aan ka heli Fern Austria (Dryopteris carthusiana) iyo Fern midig (Dryopteris dilatata). Caadiga ah sidoo kale waa joogitaanka sedge (Carex) iyo (Australis Phragmites) caadi cawsduur, gaar ahaan agagaarka balliyada kaynta yar. In dooxooyinka at ilo, ilo waa horsetail caadi ugu weyn (telmateia Equisetum) .Mid ka mid ah noocyada dhirta la ilaaliyo waxa inta badan ka dhaca trichomanes (Trichomanes speciosum). The noocyada invasive ugu dhibaato waa geed ku Eastern cad (Pinus srobus) in khatar laga yaabo in ay la lafaguro kaymaha geed relict. Waxaa lagu beeray iyo noocyada kale ka dhakhso u kordhaya geed ka lalmada sida cas (Quercus rubra), larch Yurub (decidua Larix) iyo qoryo beroosh ah grand (Abies grandis).
Ma jiraan laba xamaarato, gaabis (fragilis Anguis) iyo mas (Natrix natrix) iyo laba nooc oo lafdhabarka, rah (Buufo Buufo) oo rihii (temporaria Rana). Magaaladu waxay samaysaa xaalado wanaagsan oo loogu talagalay buulkiska shimbiraha. Ilaa hadda, waxaa jira ayaa laga helay noocyada shimbir 73 iyo noocyada 62 yihiin xitaa xilliga kulaylaha.  ka mid ah kuwa ugu badan waxaa ka mid ah Kestrel (Falco tinnunculus), iyo guumaysta tawny ah (Strix aluco), Chaffinch (Fringilla coelebs), redstart (phoenicurus Phoenicurus), Jay magpie (Garrulus glandarius) goldfinch (Carduelis carduelis) (PICA PICA), shimbirtu (marayay montanus) woodpecker cagaaran (PICU viridis), bellflower (chloris Carduelis). Waxaa ka mid ah shimbiraha ilaaliyo waxaa ka mid ah Liqidda Common Swift (Apus apus) guumays (rustica Hirundo) (Bubo bubo), Raven (Corvus corax) Jackdaw (monedula Corvus), pied (parva Ficedula).
Waxaa la helay nuujiya 14 - Amme (Meles Meles) bar Yurub (Talpa europaea), marten geed (Martes martes), marten geed (Martes foina), dawacadii (Vulpes vulpes), mouflon (musimon Ovis), mouse huruud ah-adag (flavicollis Apodemus), cilmiga bangiga (Clethrionomys glareolus), iska daaqda ugaadha duurjoogta (scrofa Sus), shrew (Sorex araneus), cawl (capreolus capreolus), Dabagaale (akne Sciurus), bakaylaha (europaeus Lepus) iyo fiidmeerta kabo faras yar ( hipposideros Rhinolophus), kaas oo si ba'an halis. Dadkeeda waxaa ka mid ah shakhsiyaadka 150-300. The xawayaanka aan inta badan ka dhaca gobolka waxaa ka mid ah temnostní crosshead (Meta menardi) Cicindela campestris (Cicindela campestris) ammophila sabulosa (ammophila sabulosa) libaax qudhaanjada caadiga ah (formicarius Myrmeleon), geed iyo jiriqsiga (buprestoides Spondylis) dazule wan (Acanthocinus aedilis) . Waxaa sidoo kale jira maro dhif ah (Callimofpha dominula).
Sababta loogu talagalay ilaalinta waa magaalo muhiim ah oo ku taala Bohemian Paradise oo leh calool xumo. Waxaa sidoo kale jira dhowr dhirta iyo xayawaanka la ilaaliyo. Tusaale ahaan, dhirta waa timo gaaban (Trichomanes speciosum) iyo rinolophus hypposideros oo halis ah. Goobta dabiiciga ah dabiiciga ah waa qayb ka mid ah Biyaha Jannada ee Bohemian Protected Area, taas oo ka tirsan Maamulka Aagga Goobta Badbaadada ee Jannada Bohemian. Ilaalinta dhulku waxay ku jirtaa Qorshaha Daryeelka ee PR Hruboskalsko. Dhibaatooyinka ugu weyn ee ilaalinta waxaa ka mid ah daboolka daaqsinka ka soo baxa dhagaxyada, dhulkii burburay jidka iyo dhagxaanta dhagxaanta fuulaya.
Hruboskalsko Reserve dabiiciga ah waa meel aad loo booqday. Marka lagu daro fuulitaanka, socodka iyo baaskiilka waa caadi. Booqashooyinku ma aha inay ku raaxaystaan ​​ra'yiga cajiibka ah ee dhagaxyada isku midka ah, laakiin sidoo kale dabeecadda gaarka ah. Waxaa jira dalxiisyo badan oo calaamad u ah dalxiisayaasha iyo baaskiilaha. Meelaha ugu xiisaha badan ee xiisaha leh waa Marian Lookout u dhow Hrubá skala, halkaas oo mid ka mid ah aragtida ugu quruxda badan ee Jannada Bohemia on Dragon Rocks iyo Trosky waa. Under hrubá skala qalin waxaa jira dooxo qoto dheer leh maris ah lixdan iyo shan mitir dheer dhagax la yidhaahdo Mouse Hole. Waxyaabaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah waxaa ka mid ah Arboretum of Bukovina iyo qaabka dhagax ee Čertova ruka. Halkan waxaa ah goobta qadiimiga ah iyo haraadiga qalcadda dhexe. Qalabka muhiimka ah ee Hruboskalska waxaa ka mid ah Valdštein Castle, Hrubá skála Chateau, oo ah qaab dhismeedka dhismaha dadweynaha Kopitce's Farm iyo Sedmihorka Spa. Booqashada maalinlaha ah ee aagga, waxaa suurtogal ah in aad isticmaasho fursadaha kala duwan ee hoyga, martida agagaaraha ah ama gudaha Camp Sedmihorky.
Magaalada magaalada Hruboskalskee waxay leedahay dhulalka ugu sareeya. Waxaa jiray tii ugu horeysay oo madax banaan oo Czech ah oo laga soo galo 1928 oo ku taal madaarka Anebo, kaas oo ay qaadeen Karel Čabelka oo la shaqeeya shaqaalaha Bausys iyo Náhlovský. Diyaarinta sandstone sanduuqa waxaa loo tixgeliyey diyaarinta wanaagsan ee buurta. Intii uu dagaalku socdey, Joska Smítko wuxuu ku dhuumanayay Hruboskalsko, oo si weyn u wareegay sandstone sandstone iyo wuxuu noqday tusaale loogu talagalay dadka fuulayasha kale. Ka dib markii dagaalka Hruboskalsko noqday xarunta dhexe ee sandstone sandstone. Danta xiisaha badan ee Bohemia hoos ayay u dhacday ka dib sanadka 1989, marka fursadaha safarka dibedda loo furay, laakiin maanta waa soo kordhay. Qayb ka mid ah Hruboskalský Rock waa xabaalo calaamad ah, kaas oo markii hore la dhisay fikradda abuurista xasuusin loogu talagalay dadka kacsan ee ku dhinta xeryaha qoob-ka-dhaca intii lagu jiray dagaalkii labaad ee aduunka. Ugu dambeyntii waxa ay noqotey taariikhi buuralayaal kale oo ku dhintay.
Trosky (514 m kor ku heerka badda, maabka lagu soo waramayaa height 488) waa buuraha neovolcanic la qalcaddii cunaa hilibkiisa Trosky sidoo kale ugu baaqay Czech uurqaadida Jannada, qiyaastii inta u dhaxaysa Turnov iyo Jicin, degmada cadastral ee gobolka Troskovice Semily Liberec degmada. Haraaga burburka ayaa waxaa calaamad u ah Jannada Bohemian iyo mid ka mid ah Daar wayn ugu soo booqday ee Czech Republic. Qaybaha sare ee buurta waxaa ka jira aagga ilaalinta ee dabiiciga ah ee Trosky. Dusha sare waa meesha ugu sarraysa ee Vyskeřská Highlands.
Qashin-qubka ayaa ah xakamaynta nabaad-guurka. nabaad Selective qaaday bulk of pyroclastics ka furteen oo mataano ah sahayda ay ula socdaan marno hore monogenic sameeyay basanites is haysta (nooc ka mid ah basalt). Meelaha u dhexeeya labada minaaradu weli wali waxaa ku yaal meeraha hoose ee qadar ahaan lagu dhejiyo iyadoo la raacayo jihada xaglaha. Mawduucani wuxuu u egtahay mid ka mid ah qulqulka qulqulka lava ku shubay ilmaha. Gawaarida iswada leh waxaa lagu daboolaa qaybaha kuraasta pyroclastic. Qalabaynta looma dhicin, laakiin waxay ka muuqan tahay maadada dhuxusha in jeexjeexu uu ku dhajiyay dusha sare ee qaabka jilicsan. Heerka kala-soocidda iyo is-dhex-galka jajabyada vesicular waxay u dhigmaan nooca Strombolic ee qarxinta. Bazanit z Trosek waxay taariikhda u tahay 16,5 malaayiin sano. Hawlgalku wuxuu ku bilaabmay abuurista baaluqa baga Baba, oo ay weheliso dheecaan lafdhabarta ah. Ka dibna, xarunta dhaqdhaqaaqa ayaa si xoogan u dhaqdhaqaaqday xagga bariga, oo abuuray aabe walaac ah oo ka mid ah Virgin. Waddada Waddiga waxay ku gaabisaa in lagu naqshado socodka lafaha ee la xidhiidha Cone Cone iyo jeexjeexka jilicsan ee jilicsan ayaa ka soo horjeeda lafaha. Dhaqdhaqaaqa ayaa sii kiciyay xitaa dhinaca bari, halkaas oo 20 ahayd, sida laga soo xigtay markhaatiyadii, ilaa 1940-kii. qarniyo badan oo dhagax weyn oo cajiib ah oo laga soo saaro. Laba munaaradaha dhagax weyn oo sababo darfaha soupouchu dissected ayaa qaabeeyey in lagu daro hawlaha aadmiga periglaciálním cimilada qabowga: qarar dhaxan, dildilaac, oo dhagaxana kaalmada-soociddiisa columnar. Meel marin jiitam ah ayaa burburay burburka. Waxaa jira muraayad sandstone ballaaran oo leh qaabab dhagax ah oo ku yaalla qulqulaha dhaadheer (tuulada dhagaxa - Apolena Nature Reserve ee koonfurta-koonfur). Goobta ugu badani waa geedo geedo geedo ah, qaar ka mid ah oo ah dhirta iyo geedaha kore.
Prachovské skály jsou skalní uskupení pískovcových útvarů různých tvarů, rozkládající se zhruba 5 Az 7 km severozápadně od města Jičín, rezervace přírodní, součást CHKO Český Raj a oblíbený beritamayaan turistů. Vznikly v období druhohor jako usazeniny na okraji dheeraad ah.
Waxaa jira natiijooyin qadiimiga ah oo cadaynaya in dadku halkan ku nool yihiin waqtiyadii hore ee dhagaxa Stone. Dhulka oo dhan dhagaxyada ayaa ahaa dabiiciga dabiiciga ah ee qabaa'ilka Slavic, kaliya meelo yar oo ka buuxay dooxooyinka. Gudaha, degitaanka koowaad ayaa la dhisay.
Malaha dhammaadka 13. Kaluunka Velis waxaa lagu dhisay mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee la yiraahdo Veliš manor. Dhowr sano ka dib, hantidii waxaa la geliyey hanti-dhowrka Vartemberks, iyo degsiimooyin kala duwan ayaa la abuuray dhammaadka 15. Trčková ee Lípa ayaa halkan ku xusan sida milkiilayaasha. Bilowga 17. qarnigii koobaad waxaa la wareegay Smiřičtí oo ka yimid Smiřice, laakiin 1625 hantidii hantida waxaa la wareegay qoyskii Wallenstein waxaana lagu lifaaqay dukaankooda. Ka dib markii burburkii hareeraha la burburiyey, degsiimooyinka dhagaxyada ayaa la waayay.
stage A cusub bilaabmaa 1637 marka guryaha waxaa la guddoonsiiyey Colonel Henry Slik ee qoyska gobolka Šlik la hantidoodii ee Western Bohemia, kuwaas oo loo dalacsiiyay abtirsan by gooyo Sigismund. Rod Šliky wuxuu leeyahay hantida degaanka ilaa qaranimada 1948.
1866 wuxuu ka mid ahaa dagaaladii Prussian-Austrian ee ku dhow dhagaxyada, kuwaas oo Prussians, inkasta oo tiro yar, ay badisay.
Tan iyo dhammaadka 19. qarniyadii, dhagaxyada ayaa noqday bartilmaameedka labadaba iyo dalxiisayaasha. 1933, waxay noqdeen kayd qaran oo dabiici ah.
Dacwada dib u celinta, qoyska Šliky waxay soo iibsadeen xaafadda 1993 waxayna bilaabeen inay ka shaqeeyaan adeegyada la xiriira dalxiiska. Ka qaybgalka dadweynaha waxaa lagu qiyaasay dadka 300 000 sanadkiiba.
Dukumiinti ugu horeysay ee dhismaha dhagaxyada oo dhan horeyba waxay ku dhacday 1874. Professor ee dugsiga Jičín ee dugsiga Gramar Antonín Zefyrin Maloch ayaa abuuray qorshe faahfaahsan iyadoo la adeegsanayo habka wareegsan iyo tallaabada. Natiijada shaqadiisu waxay ahayd inay noqoto khariidad faahfaahsan oo aan waligeed la dhammeystirin. Wadooyinka ugu horreeya iyo qaababka dhagax weyn ayaa calaamad u ah ardayda 1879 Maloch, kuwaas oo, sida uu qorshahoodu yahay, khariidadda Map of Prachov Rocks.
Dhagaxyada waxaa lagu magacaabo Ivan Mladek's magaciisa oo kale.
Hadda waxaa jira saddex dalxiis oo dalxiisayaal ah. Xilliga dalxiisku wuxuu ka socdaa 1. Abriil ilaa dhammaadka Oktoobar. Helitaanka dhagaxyada waxay ku xiran tahay lacag. Dumar-yahannada ayaa leh ikhtiyaarka ah inay iibsadaan tikidhka qiimo jaban, waxayna sidoo kale ka guuri karaan meelo ka baxsan waddooyinka loo qoondeeyey, laakiin waa inay yihiin xubno ka tirsan CHS ama UIAA. Dhagaxyada waxaa jira kuwo badan oo wax laga beddelay, rajooyin kala duwan oo la magacaabay. Bartamaha aagga dhagaxa ah waxaa ku yaal barkad dabiici ah oo lagu magacaabo Pelíšek.
Castle Pařez - qalcado dhagax.